I-Arkansas yaseBottle Best Gardens
Eunited States Arkansas
Akukho nto ingcono kunokuchitha ixesha langaphandle lijikelezwe ngobuhle bemvelo. Ukuhamba ngegadi yezityalo kunokuphumla, ukuvuselela kunye nokuzonwabisa, amava okufunda. I-Arkansas yindawo yesimo semvelo kunye nobusika bethu obumnandi basinika ithuba lokuba neendawo ezimbalwa zegadi zityalo. Ngethuba lentwasahlobo kunye nehlobo, ezi ndawo ziza ziphila kunye nombala kunye nobomi.
Uninzi lwegadi lwezityalo zityalo zityalo zityalo, ngoko unokufunda okufutshane malunga neentyatyambo zombuso ngelixa ujikelezwe yendalo. Ezinye ezimbalwa zezigadi zihlala kumda weedolophu okanye zivale ngokwaneleyo ukuba zenze uhambo olukhawulezayo. Imiyezo yaseGarvan e-Hot Springs iphela iiyure ezimbalwa, kodwa iWalwood Park isekweni. Nangona uhlala edolophini, ungathatha uhambo oluya kwi-Arkansas Historic Museum kwaye ubone igadi yakhe yemifuno. Unokuqwalasela kwakhona iIgadi kwi-Old Mill.
Garvan Woodland Gardens. Amanda Galiano
Le epaki ye-acre e-210 itholakala kufuphi ne-Hot Springs National Park. Izitiya zibonisa iintyatyambo zentyatyambo, imilambo ehamba ngokukhawuleza kunye namanzi, kunye nezakhiwo zokwakha kwiindawo zemvelo. Kukho neJapan Garden, ezininzi ezinqabileyo zezihlahla kunye neentyatyambo kunye neegadi zeerandi. Kufumaneka kwi-498 e-Arkridge Road, kwiSizwe seHotos Park, i-AR 71913. I-Cal l501-262-2711 okanye i-888-530-6873.
Wildwood Park kwiZiko lobuGcisa
Izitiya zaseWildwood zifumaneka kumahektare angama-105 kunye nomsebenzi wokubhiyozela ubugcisa kunye nemvelo. Izitiya zaseWilwood ziquka idivoliti yegadi yaseDaffodil, eyi-daffodil yasentwasahlobo kunye nomyezo wemiyezo yomdiliya. Unokufumana kwakhona uRichard C. Butler Arboretum ephethe izityalo zemvelo, i-Bruce Garden enezilwanyana zasendle, iifern kunye neengca, i-Doris Gay Asian Garden, i-Hunter's Glen kunye ne-BOP Water Garden. Izitiya ziseChenal Valley, nje ngomzuzu-20 umqhubi we-downtown Little Rock
I-Old Mill kunye ne-Gone With Wind
I-Mill Mill: North Little Rock, Arkansas. Amanda Galiano
I-Old Mill ihlala kwiNorth Little Rock. Ngoxa i-pc yeplani yeedolophu, banemiyezo enhle kakhulu kwipropati. Kufumaneka kwiLakeshore.
Lo myezo unemithi engama-33 ekwimithi elukhuni, khetha izityalo zendalo kunye nezityalo eziguqukayo. Zineemithi, amahlathi, iinduli kunye nezilungiso zamadwala. Ungakwazi ukubona nezinye izilwanyana zasendle. Ifumaneka kwi-Scenic Highway 62 West (5 miles entshonalanga yeEureka Springs), Ibhokisi 362, i-Eureka Springs, AR 72632. Shayela 501-253-9244.
Umyezo waseBotanical we-Ozarks
Isiza sama-acre angama-86 ngoku sichaza ukutshala kwexesha elincinane kwindawo encinane, apho ungabonakalisa khona iindawo zasendle, uhambo oluhamba ngamanxweme kunye nohambo lokuchonga umthi okhokelayo. Isicwangciso sesicwangciso sendawo siquka intsimi engummangaliso kakhulu. Nangona kunjalo, kubalulekile ukujongwa kwimeko yayo yangoku. Efumaneka kumda weFayetteville-Springdale kwiCrossover Road (Highway 265).
I-Historic Museum yase-Arkansas
Nangona kungengomyezo osemgangathweni, uhambo lweMbali ye-Arkansas lwe-Museum lunezityalo ezininzi ezinokujonga. Into ephawulekayo yimiyezo yemifuno yeyeza. Iquka izityalo ezisemzini kunye nezangeniswayo ezisetyenziswe ngabahlali kunye nabemi baseMerika ukuphilisa. Itholakala ngaphandle kweSitolo sePrinta se-Woodruff. Iimyuziyam ziyafumaneka kwi-200 E. KwiNdlela yesithathu kwidolophu yaseLittle Rock.
I-Mountain Valley Spring: Hydroponics
Akuyona ingadi yakho yendabuko, kodwa uyishiye kwinkampani yokuxhamla amanzi ukuba uthi, "Ulibala umhlaba." Ikhampani ye-Mountain Valley Spring Water ineendawo zendawo ye-hydroponic ekutyekisweni kwayo ibonisa ukuba izityalo zingakhula njani emvelweni wamanzi angamanzi ngaphandle komhlaba.
I-State Capitol Rose Gardens
Izizathu zeCapitol ziquka izityalo ezininzi eziqhakazileyo kodwa ezona zimangalisayo ziyidididi. ICapitol igqithisa ama-rose ama-1,500 emasimini amabini. Kwakhona banemibhobho enhle yee-cherry kwiiveki ezimbalwa zonyaka.
1875 i-Peel Mansion & Gardens
Le yintsimi enomdla ngokuba yenzelwe ukulinganisa igadi yeshumi elinesithoba. Iindwendwe zabahlali bexesha lokuqala zaxoxwa kunye nophando lwenziwe kwizityalo kunye nesitayela somyezo. Iindidi ze-vignette zidibanisa phakathi kweendlela zokuhamba kunye nemithi emthunzi omkhulu ukwenzela ukudala isimo sengqondo somntu. Efumaneka kwi-400 eSalton Boulevard, eBentonville, AR 72712 (501) 273-9664.
IArboretum iyazinikezelwa ekulondolozeni izityalo eziqingqiweyo, eziqabileyo kunye nezomnotho kwi-West Gulf Coastal Plain kwingingqi yaseUnited States. Yindawo enhle yokubona imithi eninzi yemveli, iintyatyambo kunye neentaka kunye neentyatyambo ezimbalwa kunye nemithi. Kukho kwiNtaba eHolly Road naseTimberlane (kufuphi ne-El Dorado High School), uEl Dorado, AR 71731-7010 (870) 862-8131.
Imisebenzi kwi-Companies Fortune 500 e-Arkansas
Indlela Yokucoca I-Tip (Ihlazo)
5 yeyona ndawo i-Arkansas RV Parks
Indlela yokwenza i Cookies yeHlary Clinton yeChocolate Chip
Iindawo eziPhambili ze-Crappie zokuLoba kwi-Arkansas
Ukufaka isicelo seMvume yomtshato / yomtshato e-Arkansas
Yintoni ongayibona, Yenza kwaye udle e-Hillcrest
Konke malunga nePlondon yeBathoon Springs
Kuphi kwiPaki kufuphi ne-Sea-Tac Airport (kuquka iindawo ezincinci)
Yenza i-Prohibition Punch esuka kwi-Grand Central's Campbell Bar ekhaya
Isikhokelo semicimbi ye-Movie kwi-District of Columbia
Ukuhlolisisa iidolophu kunye needolophu ezihlangene neChesapeake Bay
Oko Akufanele Uyenze kwi-Safari e-Afrika
I-Southern Vermont Garlic & Herb Festival
I-Best Best Kids's Fishing Pools ukuthenga ngo-2018
I-Pennsylvania RV Parks Kufuneka Utyelele
IArc de Triomphe eParis: Ikhokelo elipheleleyo labaTyeleli
Umgangatho womoya ngexesha lezorhwebo
Ingqungquthela yeSetem e-Ilhéus
Ukubhiyozela iKrisimesi eBangkok